2nr Apk Download Ho an'ny Android [2022 Nohavaozina] | APKOLL
Salama daholo, miverina miaraka amin'ny fampiharana Android hafa antsoina hoe 2nr Apk izahay. Fampiharana mahagaga manolotra laharana finday ary tsy mila taratasy ianao. Izy io dia manome endri-javatra mahagaga kokoa, izay afaka manampy anao amin'ny surf amin'ny Internet.
Araka ny fantatrao fa tsy azo antoka ny manome surf amin'ny Internet amin'izao fotoana izao, ka izay no tsy ahafahan'ny olona manome ny laharana findainy manokana. Noho izany dia eto ianao, mizara ity app ity aminao rehetra. Hizara izay rehetra fantatsika izahay, hijanona miaraka aminay fotsiny ary mankafy.
Topimaso momba ny App 2nr
Izy io dia rindrambaiko Android maimaimpoana izay novolavolaina manokana tamin'ny fiteny poloney. Noho izany dia sarotra kely ny mahatakatra ireo miteny hafa. Saingy manana interface tsotra be izy, noho izany, azonao idirana tsy misy olana.
Misy rindranasa sy tranokala Android maro hafa, izay ilainao ny mampiditra ny nomeraonao. Tsy ilaina ny mametraka ny num anao manokana, satria maro ny hackers afaka mahazo ny num anao manokana ary mampiasa azy io amin'ny activate tsy ara-dalàna.
Ny olana iray hafa dia ny Smartphone farany, izay manome anao ny fahafahana miditra amin'ny karatra Sim tokana ihany. Noho izany dia tsy maintsy mahazo fitaovana maro ianao mba hahazoana isa miparitaka, fa handany vola be ianao.
Noho izany ny fampiasana ny App 2nr dia afaka manana num hafa ianao amin'ny fampiasana Smartphone iray ihany. Fampiharana Android maimaimpoana io, ahafahanao mahazo isa telo hafa. Tsy misy taratasy na zavatra hafa toa izany azonao atao amin'ny alàlan'ny fampiasana an'ity app ity.
Azonao atao ny miditra ao amin'ny fanaovana kaonty marobe amin'ny tranokala na fampiharana Android ary mankafy izany. Izy io koa dia manome anao SMS sy MMS ary miantso miaraka aminy mihitsy aza. Azonao atao ny miditra amin'ny num samihafa ho an'ny num ofisialy ary num hafa ho an'ny fianakaviana.
Anaran'ny fonosana pl.rs.sip.softphone
Endri-javatra lehibe an'ny 2nr Apk
Izy io dia manana endri-javatra maro araka izay noresahintsika. Hizara ny hevi-dehibe sasany amin'ity lisitra eto ambany ity aho, fa raha mieritreritra ianao fa mety tsy manonona ny sasany amin'izy ireo aho dia azonao zaraina izany. Azonao zaraina amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra izy ary aza misalasala mampiasa azy.
Surfing amin'ny Internet azo antoka
Manaova kaonty marobe
Fafao amin'ny fotoana rehetra
Azo antoka ve ny mampiasa Apk 2nr?
Eny, azo antoka ny fampiasana azy. Manome anao fomba tsotra fotsiny ahazoana isa maimaim-poana, noho izany tsy misy atahorana. Azo alaina ao amin'ny Google Play Store izy raha te hanamarina. Aza manana eritreritra faharoa fa misintona Apk 2nr fotsiny.
Ara-dalàna ve ny fampiasana fampiharana 2nr?
Eny, ara-dalàna ny fampiasana azy. Manome anao num vaovao hampiasana izy, fa miankina aminao ny fomba fampiasana azy ireo. Raha nampiasa azy ireo ianao tamin'ny karazana activite tsy ara-dalàna dia hiatrika olana ianao ary tsy tompon'andraikitra amin'izany izahay na hanao an'ity app ity. Noho izany, ampiasao ara-dalàna ity fampiharana ity.
Ahoana ny fampidinana ny Apk 2nr?
Raha te-hisintona ny App 2nr dia mila mitady ny bokotra fampidinana fotsiny ianao eto amin'ity pejy ity, izay ho eo an-tampony sy eo ambany. Izahay dia efa nizaha toetra ary nanome rakitra Apk azo antoka sy miasa, ka mahatsiaro ho voaro amin'ny fikitihana ny bokotra ary miandry segondra vitsy.
Aorian'ny fisintomana azy dia mila manokatra ny fampirimana fisintomana ianao ary manindry ny rakitra Apk. Safidio ny safidy fametrahana ary miandrasa segondra vitsy. Vantany vao apetrakao dia sokafy ary ankafizo.
2nr App no ​​fampiharana Android tsara indrindra, izay manome anao tsy maintsy mampitombo isa maro amin'ny finday finday iray. Ny fampiasana azy amin'ny fomba tsy ara-dalàna dia mety hiteraka korontana aminao, ka fidio amin'ny fomba azo antoka sy ara-dalàna.
Sokajy Apps Tags 2nr, 2nr Apk, 2nr App Post Fikarohana